हेर्नुस्, केकी र नाजिरको ‘राज्ज रानी’ ट्रेलर कस्तो छ ? « Ramailo छ
हेर्नुस्, केकी र नाजिरको ‘राज्ज रानी’ ट्रेलर कस्तो छ ?
नाजिर हुसैन र केकी अधिकारी मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘राज्जा रानी’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार प्रेसमिट गर्दै यम थापा निर्देशित फिल्मको प्रोमो रिलिज गरिएको हो । रमेश एम के पौडेल निर्मित राज्जा रानी पुष २१ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । प्रोमो हेर्नुस् :
मैथिली भाषी युवायुवतीको प्रेम कथा रहेको ‘राज्जा रानी’ तराईका दश जिल्लाहरुमा भने मैथिली भाषामा पनि प्रदर्शन हुनेछ । पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन रहेको फिल्ममा तारा प्रकाश लिम्बु र दीपक शर्माको संगीत छ । आर्यन पौडेल सह निर्माता रहेको फिल्मका लेखक निर्देशक थापा स्वयम् हुन् । निर्मल शर्मा फिल्मका संयोजक हुन् ।